आजको दिन कुन राशी हुनेहरुका लागि फाइदाजनक रहेको छ ? हेर्नुस् आजको राशीफल - Sacho Post
आजको दिन कुन राशी हुनेहरुका लागि फाइदाजनक रहेको छ ? हेर्नुस् आजको राशीफल
२०७७ भाद्र २६, शुक्रबार ०७:३४ बजे
वि.संं २०७७ साल, भाद्र महिना, २६ गते, शुक्रवार, शुद्धआश्विन कृष्ण ९अनलागा० नवमी, मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन राशिको चन्द्रमा, सिद्धि योग, तैतिल र गर करण, प्रमादी संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव स् सोह्रश्राद्धअन्तर्गत नवमी श्राद्ध, मातृ नवमी, अविधवा नवमी श्राद्ध, मातृस्मृति दिवस, भोलिको चाडपर्व र उत्सव स् सोह्रश्राद्धअन्तर्गत दशमी श्राद्ध, भद्रा करण दिनको ११।२७ बजेदेखि राती ११।२५ बजेसम्म ।
समाजमा साख बनाउने उपयुक्त समय छ । उपाहार पुरस्कार आदि पाइनेछ । व्यापार व्यवासयमा लाभ मिल्नेछ । आम्दानीमा कमी आउने छैन । बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लाभ दिलाउनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा लगानीको योजना छ ।
आर्थिक दृष्टिले राम्रो समय छ । नोकरी र व्यवसायिक क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ । सुनचाँदी जस्ता धातुको कारोबारमा राम्रो छ । भौतिक साधन जोहो गर्ने समय छ । बोलीको भरमा काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्ला । दिदी बहिनीको सहयोग पाइनेछ । आम्दानी प्रशस्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल छ ।
मनमा दोधारको अवस्था आउन सक्छ तर पनि आज नयाँ काम शुरु गर्ने समय छ । अन्न, फलफूल जस्ना व्यवसायबाट मनग्ये फाइदा हुनेछ । अन्य व्यापार व्यवसायमा पनि लाभ मिल्नेछ । प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला छ। रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ।
नचाहेको क्षेत्रमा खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्नेछ । प्रतिकूल समय चल्दैछ । यात्रामा ननिस्किनु नै राम्रो हुन्छ । जिद्दीपन र घमण्डलाई त्याग्नु राम्रो हुनेछ । सानो कामलाई अत्यधिक खर्च हुनेछ। बेसुरको निर्णयले पछिलाई समस्या पर्न सक्छ। छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्नेछ। आफन्त पनि टाढा हुनेछन्।
दाजुभाइको सल्लाह पाइनेछ । रोकिएका काम सम्पन्न हुनेछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक काममा मन जानेछ । आम्दानी उठ्ने योग छ । आम्दानी मनग्य भए पनि आकस्मिक खर्चले धन संग्रहमा बाधा पुग्नेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आजको लगानीले दुरगामी फाइदा हुनेछ ।
सामाजिक सम्बन्ध सदृढ हुनेछ । परीक्षा वा प्रतियोगितामा विजय प्राप्त हुनेछ । हरेक क्रियाकलापमा मान्यजन वा अभिभावको सल्लाह मान्नु राम्रो हुन्छ । आर्थिक फाइदा कमै भए पनि कामले ज्ञान दिलाउनेछ। लगनशीलताले लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ।
व्यस्त दिनचर्या रहेको छ । संयम र लगनशील हुनुपर्नेछ । छिमेकी र आफन्तबीचमा वैरभाव हुनेछ । पेसा वा रोजगारीको क्षेत्रमा संघर्ष गर्नुपर्ला । धेरै समय अरूका लागि जुट्नुपर्नेछ। लक्ष्यमा पुग्न निकै संघर्ष गर्नुपर्ला। श्रमपूर्वक समर्पित हुँदा पनि कामको मूल्य कम मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ।
मनमा कताकता चिन्ता र शंका भए पनि उत्साहमा कमि हुनेछैन । जोखिमयुक्त काम र यात्राका क्रममा सचेतता अपनाउनुपर्छ । लामो समयदेखि रोकिएको काम पुनः शुरु गर्ने अनुकूल समय छ । बढी खर्च र यात्रा दुबै हुनसक्छ । तर यसले आर्थिक रुपमा टेवा नै पुग्नेछ । स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला।
प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनुका साथै मनग्य धन लाभ हुनेछ। सोख पूरा हुनेछ भने विभिन्न भौतिक साधन प्राप्तिको योग छ। नयाँ अवसरले काममा उत्साह जगाउनेछ। व्यवसायका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। निम्तो आए पनि आतिथ्य खर्चिलो तथा महँगो साबित हुनेछ।
आमा वा मामाको आशिर्वादले काम गर्न सकिनेछ समय छ । देख्दा सामान्य भए पनि त्यसले दिर्घकालिन फाइदा दिलाउनेछ । बोलिकोक कदर हुनेछ । काम गर्दा आर्थिक सामाजिक र व्यवहारिक फाइदा हुनेछ । विशेष ठाउँमा तपाईँको निर्णयको कदर हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा खटेजति सफलता मिल्नेछ ।
बौद्धिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । कुनै दिर्घकालिन योजनालाई मूर्तरुप दिन आजको चिन्तन र विचार उपयुक्त रहेको छ । भाइबहिनी र छोराछोरीको क्रियाकलापले सन्तुष्टि दिलाउनेछ । साथीभाइ र बन्धुवान्धवले सहयोग गर्नेछन् । खानपान र मनोरञ्जनका लागि समय राम्रो छ । नयाँ काम थाल्न शुभचिन्तकहरूले मात्र साथ दिनेछन्।
तनाव बढ्नेछ । आज हिम्मतको साथमा अघि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला । आफ्नो लक्ष्य र योजनाका बारेमा खुलेर छलफल गर्दा उपयुक्त सल्लाह र सहयोग प्राप्त हुनसक्छ । व्यवसाय र कामधन्दामा सफलता मिल्नेछ । प्रयत्न गर्दा साथीभाइसँगको असमझदारी सम्झौतामा टुंगिनेछ। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम समेत बन्न सक्छ।
आज शुक्रबार, यी तीन किसिमको व्रत तथा पूजा गरे प्राप्त हुन्छ विशेष लाभ